Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare oo maanta la dhaariyay. – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare oo maanta la dhaariyay.
By HornAfrik	 On May 29, 2018
Hornafrik-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeybgalay munaasabad lagu dhaarinayay Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare oo ka dhacday Madaxtooyada Qaranka ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay mudnaanta koowaad siinayso dib-u-habeynta garsoorka dalka.
Dad rayid ah oo aroorti saakay lagu dilay Muqdisho!
Ciidamada Amniga oo tagasho ku dilay Rag hubeysan oo ku sugnaa Muqdisho.